ဖာက်ပြန်နေတဲ့ချစ်သူကောင်လေးပြန်လာဖို့ ဘိုးတော်ဆီသွားလိုက်တာ ချစ်သူပြန်လာဖို့ မလိုအပ်တော့တဲ့ ကောင်မလေး (ဖြစ်ရပ်မှန် )
သူက ချစ်သူ အသစ်နဲ့ဒီနှစ်ကုန်ရင် လက်ထပ်တော့မှာ” လို့လာပြောပါတယ်။ ကျွန်မလည်း နည်းမျိုးစုံနဲ့ ကျွန်မ ဆီသူပြန်လာဖို့ ကြိုးစားပါတယ်။ ကျွန်မ ဘာမှားနေလဲ၊ ဘယ်နေရာတွေမှာ မကောင်းတာလုပ်ခဲ့မိလဲ၊လို့မေးပြီးလိုအပ်တာတွေရှိရင် ကျွန်မပြင်ပါ့မယ်။ သူလိုတာ အားလုံးဖြည့်ဆည်းပေးပြီး သူ့အလိုကျ အားလုံးဖြစ်စေရပါမယ်။
” အရင်လိုပဲ ချစ်သူ ပြန် ဖြစ်နေဖို့ ” ပဲတောင်းဆိုချင်တာပါ။
ဒါပေမယ့် ကျွန်မ ပြန်ရလိုက်တာတွေကတော့ သူ့ရဲ့အေးစက်မှု၊ စိတ်မကြည်လင်မှု၊ စိတ်ရှုပ်မှု တွေမို့ ကျွန်မ ဘာလုပ်လုပ် အမှားတွေချည်းပဲ လုပ်မိနေတော့တာပါပဲ။သူငယ်ချင်းက ကျွန်မကို ဆေးနဲ့ပြုစားတာ သွားလုပ်ဖို့အကြံပေးပါတယ်။ ပုံမှန်အားဖြင့်ကျွန်မဒီလုပ်ရပ်တွေကို မကြိုက်တဲ့အပြင် မပတသက် အနားလည်းမသွားချင်ပါဘူး။
ဒါပေမယ့် အခုတော့ အချစ်စိတ်နဲ့ သူသာပြန်လာမယ်ဆိုရင် ဘာဖြစ်ဖြစ် အားလုံးကို လုပ်ချင်စိတ် ဖြစ်ပေါ်လာပါတယ်။
ကား ၁၀ စီးရပ်လို့ရတဲ့ ကားပါကင် လေးရှိပါတယ်။ ပထမနေ့ ကျွန်မ သွားတော့ ကား ၃ စီးရပ်ထားတာတွေ့ရပါတယ်။ အိမ်ထဲကိုလှမ်းကြည့်တော့ ထိုင်နေသူများလွန်းလို့ အိမ်အဝင်ပေါက် အပြင်တောင်ရောက်နေပါတယ်။ ရီမောသံ တွေလည်း တခါတခါ အပြင်ဘက်ကို ပျံ့လွင့်လာပါတယ်။ သူငယ်ချင်းက ကျွန်မကိုအိမ်ထဲခေါ်သွားပါတယ်။
ကျွန်မမြင်လိုက်ရတာကတော့ ” အသက် ၂၈ – ၂၉ လောက်ရှိမယ့် အမျိုးသား တယောက်ဆံပင်ရှည်၊ တကိုယ်လုံးအပြည့် ဆေးမှင်ကြောင်အရုပ်တွေ ထိုးထားတယ်။ ညှို့မျက်လုံးလေးနဲ့ လက်ကစီးကရက်ကိုပြာချွေလိုက် ရီစရာပြောလိုက် ရီနေလိုက်ပေါ့၊ ဧည့်သည် တွေကလည်း တခါတလေ ရီမောလိုက်ပေါ့ ပျော်စရာကြီး။ သူကကျားသစ်ကွက်လေး ဝတ်ထားတယ်။ စွဲဆောင်မှု အပြည့်နဲ့ကြည့်လို့ကောင်းပါတယ်။
သူငယ်ချင်းပြောတဲ့ ဘိုးတော် ဆိုတာသူပေါ့ဘာလို့ငယ်ငယ်လေးပဲ ရှိနေသေးတာလဲ။
ဒါပေမယ့် ဒီအချိန်မှာ သူငယ်ချင်း က ကျွန်မ ကိုကောင်းတယ်ပြောရင် ရေရှည် ကို ဘာမှမတွေးပဲ ယုံကြည်မိပါတယ်။ ကျွန်မတို့နှစ်ယောက် နာရီဝက်လောက် စောင့်လိုက်ရတယ်။ အရင်ရောက်နေတဲ့ အုပ်စုတွေ ပြန်သွားကြပြီး ကျွန်မတို့အလှည့်ရောက်လာပါပြီ။
သူငယ်ချင်း က ( ပန်း ၅ ပွင့်၊ အမွှေးတိုင် ၅ တိုင်၊ ) ငွေ ၁၀၀ ဘတ် ကန်တော့ပြီး ကျွန်မနဲ့ ကျွန်မချစ်သူ နာမည် နဲ့ နေရပ်ရောရေးပြီး ဘိုးတော် ကိုပေးရပါတယ်။
သူငယ်ချင်းက လက်တို့ပြီး ပြောလိုက်လေ ဆိုတာတောင် ဘာပြောရမှန်း မသိပါဘူး။ ဘိုးတော်က မျက်စေ့မှိတ်ပြီး ၅ ခါ – ၁၀ ခါထိ ဂါထာ ရွတ်နေပါတယ်။ ပြီးတော့ ကျွန်မ ကို လှည့်ကြည့်ပြီး သူ့ကိုသိပ်ချစ်လို့ အခုတော့ စိတ်ဆင်းရဲနေရပြီ၊ ကိုယ့်ကိုယ်ကို သတ်သေဖို့ တောင်ကြံနေပြီ။ သူကမင်းဆီကို ပြန်လာစေချင်သလား ” လို့ လှည့်မေးပါတယ်။
” ပြန်လာစေချင်ပါတယ် “လို့ကျွန်မဖြေ လိုက်ပါတယ်။ ” ဒါဆိုရင် ငါကမင်းကိုကူညီမယ်။ ဒါပေမယ့် ဝန်ဆောင်ခ ပေးရမှာနော် မင်းမှာ ပိုက်ဆံ ဘယ်လောက်ရှိလဲ။ ” ” နှစ်ထောင်ပါရှင် ” ဘိုးတော် က မျက်စေ့မှိတ်လိုက်ပြီး ” မဟုတ်ဘူး အိတ်ထဲမှာ ငါးထောင်ဘတ် ရှိတယ်။ ဘဏ်စာအုပ်ထဲမှာ ဘတ် ၃ သောင်း ထပ်ရှိသေးတယ်။
ဒီ ၁၅ ရက် အတွင်းမှာ ပေးထားတဲ့ ကတိ အတိုင်း တိကျစွာလုပ်နိုင်ရင် ချစ်သူ ဟာ ကျွန်မဆီကိုပြန်လာမှာ သေချာနေပါတယ်။ ကျွန်မ ဟာ ဘိုးတော် ပြောတဲ့ အချက်တွေကို ကတိ ပေးထားတဲ့အတိုင်း တိကျစွာလုပ်သွားပါတယ်။ ပထမရက်၊ ဒုတိယရက်၊ တတိယရက်၊ စတုတ္ထရက်၊ ပဉ္စမရက်…. ၁၅ ရက် အပြီးမှာတော့ ပေးထားတဲ့ ရက်ပြည့်သွားပြီမို့ နောက်နေ့မနက်အစောကြီးပဲ ကျွန်မက ဘိုးတော် ဆီကိုထွက်လာခဲ့ပါတယ်။
” ” အမေ ကိုချစ်လား ” ” ချစ်ပါတယ် ” ” မင်းကိုဘယ်သူက ဝမ်းနည်းအောင် လာလုပ်တာလဲ၊ မင်းဒီလိုခံစားနေရအောင်
ဘယ်သူကလာလုပ်တာလဲ၊ ဟို အမျိုးသား ပေါ့ဟုတ်လား ” ကျွန်မ တိတ်ဆိတ်စွာ ထိုင်နေမိတယ်။ မျက်ရည်တွေ စကျလာပြီ။ ” အလုပ်ကရတဲ့ ပိုက်ဆံ အမေ ကိုပေးဖူးလား၊ ဈေးမှာဟင်းတွေတွေ့ရင် အမေဒါလေးကြိုက်တတ်တယ် ဆိုပြီးသတိယ တတ်လား၊ မင်းဘာဟင်းကြိုက်တတ်တာလဲရော မှတ်မိရဲ့လား၊
နေ့တိုင်းစားဖို့ဝယ်လာတဲ့ ဟင်းတွေဟာ မင်းအကြိုက်လား၊ မင်း ချစ်သူ အကြိုက်လား၊ ဘာဖြစ်လို့များသူက မင်းရဲ့သွေးသားထဲထိရောက်အောင် ဩဇာလွှမ်းမိုး နေရတာလဲ” မင်းကိုသူ ဘာလို့ပစ်သွားရတာလဲ ဖြေလို့ရမလား
” မသိပါဘူး ” ပြောရင်း ကျွန်မ က မျက်ရည် သုတ်လိုက်ပါတယ် ” ” ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင် ဒါဟာ သဘာဝ ပဲလေ၊ သဘာဝ ဆိုတာရော နားလည်ရဲ့လား၊ လူကောင်း ဟာကောင်းတာပဲတွေးမယ်၊ လုပ်မယ်၊ ပြောမယ်။
မကောင်းတဲ့သူရဲ့ အတွေးဟာလည်း မကောင်းတာပဲ ဖြစ်လာမယ်၊ ဘဝမှာ ဒီလို ဆင်းရဲဒုက္ခ တွေတသက်လုံးကြုံချင်ရင်တော့ မင်းချစ်သူ ကိုပြန်လာခိုင်းလိုက်ပေါ့၊ ဒါပေမယ့် မင်းဘဝကိုပျော်ရွှင်စေချင်ရင်၊ အမေကိုဝမ်းမနည်းစေချင်ရင်၊ ဘဝကိုပိုကောင်းစေချင်ရင်၊ လူကောင်းတွေနဲ့သာတွေ့စေချင်ရင်တော့ မင်းချစ်သူကို စွန့်လွှတ်လိုက်ပါ။ အဘိုးတော့ လူတွေအသဲကွဲလို့သေတာ တခါမှ မတွေ့ဖူးသေးဘူး။
ကိုယ်ခန္ဓာကို မလုပ်ဖို့တားဆီးလို့ရပေမယ့် စိတ် ကိုတားဆီးဖို့ဆိုတာ တကယ်ပြင်းထန်တဲ့ဆန္ဒ မရှိရင်မဖြစ်နိုင်ဘူး။
စိတ်ကမင်းပိုင်တာပဲလေဒါလေးတောင် နိုင်အောင်မတားဆီးနိုင်ရင် မင်းဘဝမှာ တသက်လုံး အရှုံးပေးနေရပြီ။
အကယ်၍ စိတ်ကိုအနိုင်ရရင် တားဆီးနိုင်ရင်မင်း စိတ်မဆင်းရဲ ရတော့ဘူး။ ဘယ်သူမှ မင်းကိုလာပြီးမကယ်နိုင်ဘူး၊
ဘယ်ဆရာဝန် မှလည်း မင်းကိုပျောက်အောင်လာ မကုပေးနိုင်ဘူး။ မင်း ကိုကူညီပေးနိုင်တာဆိုလို့ မင်းကိုယ်တိုင်နဲ့ အချိန်ပဲ ရှိတယ်။ ၁၅ ရက် အတွင်းမှာ ဘယ်လိုနေလဲ။
စိတ်ဖြတ်လိုက်ပါ။ ဒီ့ပြင်အရာတွေမှာ စိတ်ကိုနှစ်ထားလိုက်ပါ။ သူ့အကြောင်းကိုစိတ်ကူးထဲတောင် မထည့်ပါနဲ့။
မကောင်းတဲ့သူဟာသူ့ ဘဝ နဲ့သူသွားလိမ့်မယ် ” ဘိုးတော်က အိတ်ထဲမှ ပိုက်ဆံ ဘတ် ၃ သောင်းကို လှမ်းနှိုက်ပြီး ကျွန်မကို ပြန်ပေးပါတယ်။ ” ဒီ ပိုက်ဆံ ဘတ် ၃ သောင်း ကို ဘိုးတော် မယူပါဘူး။ ဘတ် ၂ သောင်းကိုမင်းပြန်သိမ်းထားလိုက်ပါ။ ဘတ် ၅ ထောင်က အမေ ကိုပေးလိုက်ပါ။
” ဘိုးတော် ပြောတာမှတ်ထားပါ၊လူတွေကို မယုံပါနဲ့၊ အပေါ်ယံ အပြင်ပန်း ကိုကြည့်ပြီး မဆုံးဖြတ်ပါနဲ့၊
ဘယ်ဘိုးတော် ဆီကိုမှနောက်မသွားပါနဲ့၊ လူတိုင်းမှာ ကိုယ့် ခန္ဓာကိုယ် ထဲမှာ စွဲလန်းစရာ ကောင်းတဲ့အရာလေးတွေ ပါလာပြီးသားပါ။ ဒီအရာတွေကို တခြားသူလာပြီး နှစ်သက်လား မနှစ်သက်ဘူးလား ဆိုတဲ့အပေါ်ပဲ မူတည်နေပါတယ်။
တချို့လူတွေက အဝတ်အဝါရောင်၊ အဖြူရောင်တွေ ဝတ်ထားပေမယ့် သူတို့ရဲ့ အတွင်းစိတ်ရင်းကလေးကတော့ လူစိတ်ကိုမရှိကြတာ အမှန်ပဲ။ မင်းကမိန်းခလေးဆိုတော့ ပိုတောင် သတိ ရှိသင့်တယ်။ လူကောင်းနဲ့တွေ့ရင်တော့ ကောင်းပါရဲ့၊ လူယုတ်မာနဲ့တွေ့ရင် ခန္ဓာကိုယ်၊ ပိုက်ဆံ၊ အသဲနှလုံးတွေလည်း ဆုံးရှုံးရမယ်။
ဘိုးတော် ရဲ့ဆုံးမစကားတွေကတော့ နားနှစ်ဘက်ထဲမှာ သိမ်းထားတယ်။အခုအချိန်ကစပြီး ကျွန်မပြတ်သားတော့မယ်လို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်။ အခန်းတံခါးခေါက်သံ ကြားရပါတယ်။ ” ဘယ်သူလဲ ” လို့ကျွန်မ မေးလိုက်ပါတယ်။ ” ငါပဲဟေ့ ” လို့ဖြေသံကြားတော့ ဘိုးတော် ပြောထားတာမှန်နေတာပဲ သူတကယ်လာတယ်။
” ပြန်လိုက်ပါအုံးနော် ဒီနေ့ကျွန်မစကားမပြောချင်သေးဘူး။ အခု ဒီမှာအမေလည်းရောက်နေတယ်၊ ပြန်ပါတော့ ”လို့ညာပြောလိုက်မိပါတယ်။ ကျွန်မရဲ့စိတ်တွေ သိပ်မတင်းမာနိုင်သေး၊မပြတ်သားနိုင်သေးတာမို့ ဒီနေ့တွေ့လိုက်ရင်ကျွန်မ အရင်လိုပဲ သူ့ကိုပြန်သံယောဇာဉ် ရှိလာမိမှာမို့ အမေ ကိုအကြောင်းပြပြီး လိမ်လိုက်ရတာပါပဲ။
ဒီနေ့အထိ ကျွန်မ ဘဝ အသစ်ကို အစပျိုးပေးသူ ဘိုးတော် ထံမှာ ကျွန်မ တပည့်ရင်း အဖြစ်ခံယူထားပါတယ်။ ဘိုးတော်နဲ့သာမတွေ့ရင် ကျွန်မဘဝ လည်းဘာတွေဖြစ်လာမလဲ မတွေးရဲတော့ပါ။ လူဆိုး လူလိမ် တွေနဲ့တွေ့ပြီးဘာတခုမှမကျန်အောင် အကုန်ဆုံးရှုံး ပျက်စီးသွားနိုင်ပါတယ်။
စာဖတ်သူ သူငယ်ချင်းများကို ပြောချင်တာကတော့ ဘိုးတော် တွေဆိုတာ ဒီလိုကောင်းသူမျိုး ရှာရခက်ပါတယ်လို့ သတိပေးချင်တာပါပဲ။
ကြှနျမ နဲ့ ခဈြ သူဟာ လကျတှဲလာတာ ၄ နှဈ ရှိပါပွီ။ ဒီနှဈကုနျရငျ လကျထပျဖို့စီစဉျထားပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ သူဟာ အလိုလိုနရေငျး ” ငါတို့လမျးခှဲကွရအောငျ သူက ကြှနျမကို မခဈြတော့ပါဘူး၊ အခု သူကအသဈတှနေ့ပေါပွီ လကျတှဲလာတဲ့ အခြိနျတှမှော ခဈြတယျ ဆိုတာ ညာပွောခဲ့တာပါ။
သူက ခဈြသူ အသဈနဲ့ဒီနှဈကုနျရငျ လကျထပျတော့မှာ” လို့လာပွောပါတယျ။ ကြှနျမလညျး နညျးမြိုးစုံနဲ့ ကြှနျမ ဆီသူပွနျလာဖို့ ကွိုးစားပါတယျ။ ကြှနျမ ဘာမှားနလေဲ၊ ဘယျနရောတှမှော မကောငျးတာလုပျခဲ့မိလဲ၊လို့မေးပွီးလိုအပျတာတှရှေိရငျ ကြှနျမပွငျပါ့မယျ။ သူလိုတာ အားလုံးဖွညျ့ဆညျးပေးပွီး သူ့အလိုကြ အားလုံးဖွဈစရေပါမယျ။
” အရငျလိုပဲ ခဈြသူ ပွနျ ဖွဈနဖေို့ ” ပဲတောငျးဆိုခငျြတာပါ။
ဒါပမေယျ့ ကြှနျမ ပွနျရလိုကျတာတှကေတော့ သူ့ရဲ့အေးစကျမှု၊ စိတျမကွညျလငျမှု၊ စိတျရှုပျမှု တှမေို့ ကြှနျမ ဘာလုပျလုပျ အမှားတှခေညျြးပဲ လုပျမိနတေော့တာပါပဲ။သူငယျခငျြးက ကြှနျမကို ဆေးနဲ့ပွုစားတာ သှားလုပျဖို့အကွံပေးပါတယျ။ ပုံမှနျအားဖွငျ့ကြှနျမဒီလုပျရပျတှကေို မကွိုကျတဲ့အပွငျ မပတသကျ အနားလညျးမသှားခငျြပါဘူး။
ဒါပမေယျ့ အခုတော့ အခဈြစိတျနဲ့ သူသာပွနျလာမယျဆိုရငျ ဘာဖွဈဖွဈ အားလုံးကို လုပျခငျြစိတျ ဖွဈပျေါလာပါတယျ။
ဘိုးတျော ရာစီ ဆီကိုချေါသှားမယျတဲ့။ ဘိုးတျော က အရမျးတျောပါတယျ၊ သူငယျခငျြး အမြိုးတယောကျ ခငျပှနျးက မယားငယျနဲ့ သှားနလေို့ ဘိုးတျော က ပွနျလာအောငျ ချေါပေးတယျ၊ ပွနျလာပွီးနောကျ သူဟာ ဒီနအေ့ထိပဲ သူ့ဇနီးကို သိပျခဈြ သိပျအလိုလိုကျလာပွီး အသဈထပျမရှာတော့ဘူး။ ဘိုးတျော အိမျကတထပျအိမျလေးပါ။
ကား ၁၀ စီးရပျလို့ရတဲ့ ကားပါကငျ လေးရှိပါတယျ။ ပထမနေ့ ကြှနျမ သှားတော့ ကား ၃ စီးရပျထားတာတှရေ့ပါတယျ။ အိမျထဲကိုလှမျးကွညျ့တော့ ထိုငျနသေူမြားလှနျးလို့ အိမျအဝငျပေါကျ အပွငျတောငျရောကျနပေါတယျ။ ရီမောသံ တှလေညျး တခါတခါ အပွငျဘကျကို ပြံ့လှငျ့လာပါတယျ။ သူငယျခငျြးက ကြှနျမကိုအိမျထဲချေါသှားပါတယျ။
ကြှနျမမွငျလိုကျရတာကတော့ ” အသကျ ၂၈ – ၂၉ လောကျရှိမယျ့ အမြိုးသား တယောကျဆံပငျရှညျ၊ တကိုယျလုံးအပွညျ့ ဆေးမှငျကွောငျအရုပျတှေ ထိုးထားတယျ။ ညှို့မကျြလုံးလေးနဲ့ လကျကစီးကရကျကိုပွာခြှလေိုကျ ရီစရာပွောလိုကျ ရီနလေိုကျပေါ့၊ ဧညျ့သညျ တှကေလညျး တခါတလေ ရီမောလိုကျပေါ့ ပြျောစရာကွီး။ သူကကြားသဈကှကျလေး ဝတျထားတယျ။ စှဲဆောငျမှု အပွညျ့နဲ့ကွညျ့လို့ကောငျးပါတယျ။
သူငယျခငျြးပွောတဲ့ ဘိုးတျော ဆိုတာသူပေါ့ဘာလို့ငယျငယျလေးပဲ ရှိနသေေးတာလဲ။
ဒါပမေယျ့ ဒီအခြိနျမှာ သူငယျခငျြး က ကြှနျမ ကိုကောငျးတယျပွောရငျ ရရှေညျ ကို ဘာမှမတှေးပဲ ယုံကွညျမိပါတယျ။ ကြှနျမတို့နှဈယောကျ နာရီဝကျလောကျ စောငျ့လိုကျရတယျ။ အရငျရောကျနတေဲ့ အုပျစုတှေ ပွနျသှားကွပွီး ကြှနျမတို့အလှညျ့ရောကျလာပါပွီ။
သူငယျခငျြး က ( ပနျး ၅ ပှငျ့၊ အမှေးတိုငျ ၅ တိုငျ၊ ) ငှေ ၁၀၀ ဘတျ ကနျတော့ပွီး ကြှနျမနဲ့ ကြှနျမခဈြသူ နာမညျ နဲ့ နရေပျရောရေးပွီး ဘိုးတျော ကိုပေးရပါတယျ။
ကြှနျမ နာမညျ ကိုဖတျပွီး ကံမကောငျးဘူး၊ အခဈြလုခံရမယျ၊ ခဈြသူ နာမညျ ကိုဖတျပွီး ဒါမငျးခဈြသူလားလို့မေးတော့ ဟုတျပါတယျလို့ကြှနျမ ကဖွလေိုကျပါတယျ။ ” ဘာမြားမေးစရာ ရှိသလဲ “လို့ ဘိုးတျောကမေးပါတယျ။ ခဏတာ တိတျဆိတျသှားပါတယျ။ ဘာမေးရမှနျးလညျး ကြှနျမ မသိပါဘူး။
သူငယျခငျြးက လကျတို့ပွီး ပွောလိုကျလေ ဆိုတာတောငျ ဘာပွောရမှနျး မသိပါဘူး။ ဘိုးတျောက မကျြစမှေိ့တျပွီး ၅ ခါ – ၁၀ ခါထိ ဂါထာ ရှတျနပေါတယျ။ ပွီးတော့ ကြှနျမ ကို လှညျ့ကွညျ့ပွီး သူ့ကိုသိပျခဈြလို့ အခုတော့ စိတျဆငျးရဲနရေပွီ၊ ကိုယျ့ကိုယျကို သတျသဖေို့ တောငျကွံနပွေီ။ သူကမငျးဆီကို ပွနျလာစခေငျြသလား ” လို့ လှညျ့မေးပါတယျ။
” ပွနျလာစခေငျြပါတယျ “လို့ကြှနျမဖွေ လိုကျပါတယျ။ ” ဒါဆိုရငျ ငါကမငျးကိုကူညီမယျ။ ဒါပမေယျ့ ဝနျဆောငျခ ပေးရမှာနျော မငျးမှာ ပိုကျဆံ ဘယျလောကျရှိလဲ။ ” ” နှဈထောငျပါရှငျ ” ဘိုးတျော က မကျြစမှေိ့တျလိုကျပွီး ” မဟုတျဘူး အိတျထဲမှာ ငါးထောငျဘတျ ရှိတယျ။ ဘဏျစာအုပျထဲမှာ ဘတျ ၃ သောငျး ထပျရှိသေးတယျ။
ဒီ ၁၅ ရကျ အတှငျးမှာ ပေးထားတဲ့ ကတိ အတိုငျး တိကစြှာလုပျနိုငျရငျ ခဈြသူ ဟာ ကြှနျမဆီကိုပွနျလာမှာ သခြောနပေါတယျ။ ကြှနျမ ဟာ ဘိုးတျော ပွောတဲ့ အခကျြတှကေို ကတိ ပေးထားတဲ့အတိုငျး တိကစြှာလုပျသှားပါတယျ။ ပထမရကျ၊ ဒုတိယရကျ၊ တတိယရကျ၊ စတုတ်ထရကျ၊ ပဉ်စမရကျ…. ၁၅ ရကျ အပွီးမှာတော့ ပေးထားတဲ့ ရကျပွညျ့သှားပွီမို့ နောကျနမေ့နကျအစောကွီးပဲ ကြှနျမက ဘိုးတျော ဆီကိုထှကျလာခဲ့ပါတယျ။
” ဘယျလိုနလေဲ ခံစားနရေတာတှေ သကျသာလာတယျ မဟုတျလား ” လို့ ဘိုးတျော ကမေးပါတယျ။ ” ဟုတျကဲ့ စိတျပိုခမျြးသာ နရေသကျသာလာပါတယျ ” ” သူ့ကို သိပျခဈြတာပဲလား ” လို့ဘိုးတျော ကမေးပါတယျ။
” ” အမေ ကိုခဈြလား ” ” ခဈြပါတယျ ” ” မငျးကိုဘယျသူက ဝမျးနညျးအောငျ လာလုပျတာလဲ၊ မငျးဒီလိုခံစားနရေအောငျ
ဘယျသူကလာလုပျတာလဲ၊ ဟို အမြိုးသား ပေါ့ဟုတျလား ” ကြှနျမ တိတျဆိတျစှာ ထိုငျနမေိတယျ။ မကျြရညျတှေ စကလြာပွီ။ ” အလုပျကရတဲ့ ပိုကျဆံ အမေ ကိုပေးဖူးလား၊ ဈေးမှာဟငျးတှတှေရေ့ငျ အမဒေါလေးကွိုကျတတျတယျ ဆိုပွီးသတိယ တတျလား၊ မငျးဘာဟငျးကွိုကျတတျတာလဲရော မှတျမိရဲ့လား၊
နတေို့ငျးစားဖို့ဝယျလာတဲ့ ဟငျးတှဟော မငျးအကွိုကျလား၊ မငျး ခဈြသူ အကွိုကျလား၊ ဘာဖွဈလို့မြားသူက မငျးရဲ့သှေးသားထဲထိရောကျအောငျ ဩဇာလှမျးမိုး နရေတာလဲ” မငျးကိုသူ ဘာလို့ပဈသှားရတာလဲ ဖွလေို့ရမလား
” မသိပါဘူး ” ပွောရငျး ကြှနျမ က မကျြရညျ သုတျလိုကျပါတယျ ” ” ဘာဖွဈလို့လဲဆိုရငျ ဒါဟာ သဘာဝ ပဲလေ၊ သဘာဝ ဆိုတာရော နားလညျရဲ့လား၊ လူကောငျး ဟာကောငျးတာပဲတှေးမယျ၊ လုပျမယျ၊ ပွောမယျ။
မကောငျးတဲ့သူရဲ့ အတှေးဟာလညျး မကောငျးတာပဲ ဖွဈလာမယျ၊ ဘဝမှာ ဒီလို ဆငျးရဲဒုက်ခ တှတေသကျလုံးကွုံခငျြရငျတော့ မငျးခဈြသူ ကိုပွနျလာခိုငျးလိုကျပေါ့၊ ဒါပမေယျ့ မငျးဘဝကိုပြျောရှငျစခေငျြရငျ၊ အမကေိုဝမျးမနညျးစခေငျြရငျ၊ ဘဝကိုပိုကောငျးစခေငျြရငျ၊ လူကောငျးတှနေဲ့သာတှစေ့ခေငျြရငျတော့ မငျးခဈြသူကို စှနျ့လှတျလိုကျပါ။ အဘိုးတော့ လူတှအေသဲကှဲလို့သတော တခါမှ မတှဖေူ့းသေးဘူး။
ကိုယျခန်ဓာကို မလုပျဖို့တားဆီးလို့ရပမေယျ့ စိတျ ကိုတားဆီးဖို့ဆိုတာ တကယျပွငျးထနျတဲ့ဆန်ဒ မရှိရငျမဖွဈနိုငျဘူး။
စိတျကမငျးပိုငျတာပဲလဒေါလေးတောငျ နိုငျအောငျမတားဆီးနိုငျရငျ မငျးဘဝမှာ တသကျလုံး အရှုံးပေးနရေပွီ။
အကယျ၍ စိတျကိုအနိုငျရရငျ တားဆီးနိုငျရငျမငျး စိတျမဆငျးရဲ ရတော့ဘူး။ ဘယျသူမှ မငျးကိုလာပွီးမကယျနိုငျဘူး၊
ဘယျဆရာဝနျ မှလညျး မငျးကိုပြောကျအောငျလာ မကုပေးနိုငျဘူး။ မငျး ကိုကူညီပေးနိုငျတာဆိုလို့ မငျးကိုယျတိုငျနဲ့ အခြိနျပဲ ရှိတယျ။ ၁၅ ရကျ အတှငျးမှာ ဘယျလိုနလေဲ။
စိတျဖွတျလိုကျပါ။ ဒီ့ပွငျအရာတှမှော စိတျကိုနှဈထားလိုကျပါ။ သူ့အကွောငျးကိုစိတျကူးထဲတောငျ မထညျ့ပါနဲ့။
မကောငျးတဲ့သူဟာသူ့ ဘဝ နဲ့သူသှားလိမျ့မယျ ” ဘိုးတျောက အိတျထဲမှ ပိုကျဆံ ဘတျ ၃ သောငျးကို လှမျးနှိုကျပွီး ကြှနျမကို ပွနျပေးပါတယျ။ ” ဒီ ပိုကျဆံ ဘတျ ၃ သောငျး ကို ဘိုးတျော မယူပါဘူး။ ဘတျ ၂ သောငျးကိုမငျးပွနျသိမျးထားလိုကျပါ။ ဘတျ ၅ ထောငျက အမေ ကိုပေးလိုကျပါ။
” ဘိုးတျော ပွောတာမှတျထားပါ၊လူတှကေို မယုံပါနဲ့၊ အပျေါယံ အပွငျပနျး ကိုကွညျ့ပွီး မဆုံးဖွတျပါနဲ့၊
ဘယျဘိုးတျော ဆီကိုမှနောကျမသှားပါနဲ့၊ လူတိုငျးမှာ ကိုယျ့ ခန်ဓာကိုယျ ထဲမှာ စှဲလနျးစရာ ကောငျးတဲ့အရာလေးတှေ ပါလာပွီးသားပါ။ ဒီအရာတှကေို တခွားသူလာပွီး နှဈသကျလား မနှဈသကျဘူးလား ဆိုတဲ့အပျေါပဲ မူတညျနပေါတယျ။
တခြို့လူတှကေ အဝတျအဝါရောငျ၊ အဖွူရောငျတှေ ဝတျထားပမေယျ့ သူတို့ရဲ့ အတှငျးစိတျရငျးကလေးကတော့ လူစိတျကိုမရှိကွတာ အမှနျပဲ။ မငျးကမိနျးခလေးဆိုတော့ ပိုတောငျ သတိ ရှိသငျ့တယျ။ လူကောငျးနဲ့တှရေ့ငျတော့ ကောငျးပါရဲ့၊ လူယုတျမာနဲ့တှရေ့ငျ ခန်ဓာကိုယျ၊ ပိုကျဆံ၊ အသဲနှလုံးတှလေညျး ဆုံးရှုံးရမယျ။
ဘိုးတျော ရဲ့ဆုံးမစကားတှကေတော့ နားနှဈဘကျထဲမှာ သိမျးထားတယျ။အခုအခြိနျကစပွီး ကြှနျမပွတျသားတော့မယျလို့ ဆုံးဖွတျလိုကျပါတယျ။ အခနျးတံခါးခေါကျသံ ကွားရပါတယျ။ ” ဘယျသူလဲ ” လို့ကြှနျမ မေးလိုကျပါတယျ။ ” ငါပဲဟေ့ ” လို့ဖွသေံကွားတော့ ဘိုးတျော ပွောထားတာမှနျနတောပဲ သူတကယျလာတယျ။
” ပွနျလိုကျပါအုံးနျော ဒီနကြေှ့နျမစကားမပွောခငျြသေးဘူး။ အခု ဒီမှာအမလေညျးရောကျနတေယျ၊ ပွနျပါတော့ ”လို့ညာပွောလိုကျမိပါတယျ။ ကြှနျမရဲ့စိတျတှေ သိပျမတငျးမာနိုငျသေး၊မပွတျသားနိုငျသေးတာမို့ ဒီနတှေ့လေို့ကျရငျကြှနျမ အရငျလိုပဲ သူ့ကိုပွနျသံယောဇာဉျ ရှိလာမိမှာမို့ အမေ ကိုအကွောငျးပွပွီး လိမျလိုကျရတာပါပဲ။
ဒီနအေ့ထိ ကြှနျမ ဘဝ အသဈကို အစပြိုးပေးသူ ဘိုးတျော ထံမှာ ကြှနျမ တပညျ့ရငျး အဖွဈခံယူထားပါတယျ။ ဘိုးတျောနဲ့သာမတှရေ့ငျ ကြှနျမဘဝ လညျးဘာတှဖွေဈလာမလဲ မတှေးရဲတော့ပါ။ လူဆိုး လူလိမျ တှနေဲ့တှပွေီ့းဘာတခုမှမကနျြအောငျ အကုနျဆုံးရှုံး ပကျြစီးသှားနိုငျပါတယျ။
စာဖတျသူ သူငယျခငျြးမြားကို ပွောခငျြတာကတော့ ဘိုးတျော တှဆေိုတာ ဒီလိုကောငျးသူမြိုး ရှာရခကျပါတယျလို့ သတိပေးခငျြတာပါပဲ။